Kulan ay iskugu yimaadeen ururadda Maxaliga iyo kuwa caalamiga ah ee islaamiga ayaa ka qabsoomay Xarunta Wasaaradda Qorshaynta
Kulankan oo uu gadhwadeen ka ahaa Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Somaliland Mud. Maxamed Ibraahim Aden(Qabyo-tire) oo ay wehilnayeen Agaasimaha Samalfalka Madaxtooyadda Marwo Amina Maxamuud Diiriye, la taliyaha Wasiirka Qorshaynta ee ururadda islaamiga Mud. Cabdalle Maxamud Maxamed, Agaasimaha Waaxda isdu-wida ee Wasaaradda Qorshaynta Marwo Ubax Maxamed Maxamuud iyo xubno kale oo ka mida hawlwadeenada Wasaaradda Qorshaynta. dhinaca kalena kulanka waxa ka qaybqaadanayey ilaa 22 ka mida ururadda islaamiga ah ee ka hawlgala dalka.
kulanka waxa si rasmiya u furay Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Somaliland Mud. Maxamed Ibraahim Aden(Qabyo-tire), waxaanu ku dheeraaday muhiimadda kulanka oo uu sheegay in la iskugu yimid sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka iyo wada shaqaynta wasaaraadda iyo ururadda islaamiga ah. Waxaana uu tilmaamay in diiradda lagu saari doono sii xoojinta hawlaha gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen.
waxa uu sheegay in ay taariikhda markii ugu horeysay ay tahay ee kulan noocana iskugu yimaadaan ururadda islaamiga iyo wasaaradda qorshaynta . waxa uu sheegay in markii hore ay ururadda islaamiga ahi la shaqayn jireen xafiiska sama-falka madaxtooyada balse hada xukuumad ahaan ay isla qaateen in la kulmiyo cududa dawlada oo xadhiga meel laga wada jiido si loo dardargaliyo hawlaha gurmadka iyo mucaawinooyinka.
Wasiirku waxa uu ku bogaadiyey ururaddan inay kaalin laxaadle ka qaataan taakulaynta dadka jilicsan isagoo xusay inay bixiyaan mucaawinooyin la taaban karo oo u badan raashin iyo biyo, waxaanu ugu baaqay inay sii xoojiyaan dadaalka taakulaynta.
Agaasimaha sama-falka madaxtooyadda somaliland Marwo Amina Maxamuud Diiriye , ayaa iyaduna dhankeeda tilmaamtay sida loogu baahanyahay in labada dhinca ay ka wada shaqeeyaan nidaamka dawliga si la iskula eego hadba meesha mucaawinadda la gaadhsiinayo, si amaankiina loo sugo loona fududeeyo hawlaha gurmadka.
Marwo Amina ayaa ku amaantay ururadda islaamiga kaalinta ay ka gaystaan gurmadda dadka tabaalaysan oo ay sheegtay inay marwlaba ka shaqeeyaan.
kulankan ayaa gabagabadii la iskula qaada dhigay sidii mucaawinooyinka iyo mashaariicda gargaarka ah ee ururadda islaamigu ay ka waddaan dalka loogu qaabayn lahaa si ay u wada gaadhaan dhamaan goballadda la iskuna waafajin lahaa baahiyaha iyo mucaawinadda
waxaana halkaasi talooyin wax ku ool ah ka soo jeediyey la taliyaha Wasiirka Qorshaynta ee ururadda islaamiga Mud. Cabdalle iyo Agaasimaha Waaxda isdu-wida ee Wasaaradda Qorshaynta Marwo Ubax Maxamed Iyagoo xubnaha ka soo qaybgalayna uga mahadnaqay wakhtigooda.
kulanka ayaa ku soo dhamaaday is afgarad iyo wada shaqaynta oo la sii xoojiyo